Udara Oriri | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Udara Oriri
Ị nwere ike ịhụ ụdị cherị dị iche iche n'ubi ma ọ bụ n'ụlọ ezumike niile na mba ahụ. Otu n'ime ha kere site na okike, na nke ọzọ site na nyocha nhọrọ. N'isiokwu a, anyị ga-ekwurịta ụdị udara a dị ka "Chocolate Girl", banyere atụmatụ nke osisi na ọnọdụ maka ilekọta ya. Ụdị cherry a dị obere, ma ọ ghacharịrị na-emeri obi nke ndị ọrụ ubi na ndị na-elekọta ubi.
Udara dịgasị iche iche "Vladimirskaya"
Oge ezumike bụ oge mgbe ihe niile na-agba ma na-esi ísì. Na isi ihe bụ na ị nwere ike ịnwale mkpụrụ ọhụrụ akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi nke saịtị gị. Onye ọ bụla nwere mmasị ịnụ ụtọ ubi nke ubi ha. Taa, anyị ga-ekwu maka ụdị Vladimirskaya cherry. Ọdịbendị a na-ahụkarị n'etiti ndị na-elekọta ubi.